Casriga candho-: ka dib Huawei, Samsung iyo Xiaomi, Sharp galo cayaarta - TELES Relay
ACCUEIL » TECH & TELECOM »Akhbaaraha casriga ah: ka dib Huawei, Samsung ama Xiaomi, Sharp ayaa galaya qoob ka ciyaarka
hamiga Samsung ayaa lagu yaqaan, Huawei, Xiaomi ama xataa in Lenovo daaha smartphone candho-. Waxay u muuqataa inaan sidoo kale ku waajibineyno kuwa Sharp. Shirkadda ayaa dhab ahaantii muujisay casriga oo leh shaashad isku dhejis ah.
Sannadkan waa inay ahaataa sanadka inta badan ciyaartoyda ku jira suuqa casriga ah waxay keenaan aragti u gaar ah shaashadda isku laaban. Hadda, kaliya Samsung iyo Huawei ayaa hore u soo bandhigay iyagoo soo bandhigaya siday u kala horreeyaan Galaxy Fold et Mate X. Laakiin shirkadaha kale ayaa horeyba u joogay dhismaha.
Tani waa arrinka Xiaomi, isaga oo leh casriga oo leh laba laab, laga bilaabo Lenovo, oo diyaarin lahaa a qalab kaas oo si qoto dheer u jeestay - oo aan si toos ah u jecel yahay Mate X ama Galaxy Fold - ama TCL ee raadinaya yaree qiimaha tiknoolajiyadaan.
Muuqaal farsamo ah oo isku dhejiya wata
Laakiin Japan Sharp ma ahan mid ka baxsan, sida uu muujiyay Arbacadii. Munaasabada banaanbaxa loogu talagalay saxaafadda Japan taas oo Engadget Japan joogay, soo saaraha ayaa runtii soo bandhigay noocooda ah oo shaqo smartphone screen baad. Sida mashruuca Lenovo, lakabka waa mid siman, sare ee casriga casriga ah. Shaashadda OLED qiyaaso Dhanka kale 6,18 inches leh xal of pixels per 1440 3040 iyo 300 000 in ay oggolaadaan in laalaabka.
Hadda, waxa kaliya oo ah sheyga oo aan waxba sheegeynin in qalabku uu soo baxayo sida uu ku jiro ganacsiga. Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay Engadget Japan, "Waxay u badan tahay in casriga ah Aquos iyada oo weel isku mid ah lagu iibiyo mustaqbalka ».
Maqaalkani waxa uu appeared first on: https: //www.frandroid.com/marques/sharp/581760_smartphone-pliable-apres-huawei-samsung-ou-xiaomi-sharp-rentre-dans-la-danse
Facebook wuxuu doonayaa in uu ku daboolo Afrika isagoo leh farsamoyin farsamo oo farsamo leh